जापानबाट फर्केर कुखुरापालनमा – bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > जापानबाट फर्केर कुखुरापालनमा
१६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:१४ bampijhyala
बाँपीझ्याला, गलकोट । जापानबाट फर्केर बागलुङका दुई जनाले राजनीतिसँगै कुखुरापालन व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ । राजनीतिलाई धेरैले कमाइखाने भाँडोजस्तो बनाएको नेपाली राजनीतिमा तीव्र बहस हुँदै आएको सन्दर्भमा जापान त्यागेर राजनीतिसँगै कुखुरापालन गरी अण्डा उत्पादनमा यहाँका दुई जना लाग्नुभएको हो ।
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल १६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:१४
सम्झनामा जेठ ३ १६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:१४
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? १६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:१४
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव १६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:१४
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक १६ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:१४